Ungazithenga njani iiStock kwiRumor, Thengisa kwiindaba
Thenga kwi-rumor, thengisa kwiindaba ngoyena nobangela uphambili wokukhula kwexabiso lobuchwephesha, kwaye kwiimeko ezininzi, uhlalutyo lobuchwephesha kuphela obuchazwa ngabagqabazi. Xa uthenga ngehemuhemu kwaye uthengise kwiindaba, ume ukwenza inzuzo entle kwizitokhwe zakho:
Abathengisi bezinto zentengiso thenga ngamarhe , Oko kuthetha ukuba baphatha uqikelelo olulungiselelwe ngoochwephesha kunye nabahlalutyi ngokungathi lo msitho ubusenzekile ngokuchanekileyo njengoko bekuxelwe kwangaphambili. Ngamanye amagama, bayakha kubikezelo kwixabiso, besenza ephezulu kakhulu kwibha yexabiso ekufuneka iveliswe ziindaba.
Ukuya thengisa kwiindaba inxulumene nomsitho ngokwawo. Ngamanye amaxesha ufumana ukuphazamiseka okubonakalayo kwexabiso elifikelela kwinqanaba elitsha ngaphambi komsitho kwaye wehle ezantsi kwangoko emva komsitho, nokuba iindaba ziyahambelana noqikelelo. Ixabiso elisezantsi liza ngenxa yokuba iintaka zakuqala zithatha inzuzo ekunyukeni kwazo ngokwazo. I-low low ihlala ihlala ifutshane. Emva kwayo yonke loo nto, bekukho iindaba ezimnandi kwaye iindaba ezimnandi zenzekile, ke ezo ndaba zazakhiwe ngokufanelekileyo kwaye ixabiso elitsha liphezulu.
Ukuba iindaba zilunge ngakumbi kunesimo sezulu, nangona kunjalo, abathengisi abayithathi inzuzo kuba iindaba ezingcono kunokuba bezilindelwe zitsala abadlali abatsha kwaye zithumela ixabiso liphezulu. Emva koko iintaka zokuqala zibekiwe ukuze zenze inzuzo engcono. Ukuba iindaba ziyasilela ukungqinelana nokulindelweyo, abarhwebi kunye nabatyali mali ngokufanayo bayathengisa, kwaye idiphu inokuthi ijike ibe lihla elihlala ixesha elide.
Nokuba yeyiphi na indlela, ukuthenga kwi-rumor kuhlawula umrhwebi wexesha elifutshane ogcina umunwe wakhe kwi-trigger. Ukuphonononga uqikelelo kunye nokulungela ngengqondo ukuthenga okanye ukuthengisa ngalo mzuzu wempembelelo yeendaba lishishini elinzima nelinobungozi. Akumangalisi ukuba abathengisi abasemngciphekweni baphume kwintengiso bebonke malunga nemihla yomsitho ocwangcisiweyo.
I-diclofenac sodium kunye notywala
I-epsom iityuwa zokuhlamba ukuqhina
i-viagra dosage ye-70 yeminyaka ubudala
Umahluko phakathi kwe-potassium kunye ne-potassium gluconate